သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် Twitter ရဲ့ကောင်းကျိုး ၆ Martech Zone
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Twitter ၏ကောင်းကျိုးများ
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 31, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
Twitter ၏နိဂုံးချုပ်အကြောင်းကိုပြောနေသည့်လူမှုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများစွာစွာထွက်နေသည်။ ငါရိုးသားပါလိမ့်မယ်, စီးပွားရေးအသံတွေကြားမှငါပလက်ဖောင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုရှာနေဆဲ။ တွစ်တာမှတစ်ယောက်ယောက်ကဒီကိုဖတ်နေရင်စီးပွားရေးရလဒ်တွေကိုတိုးတက်ဖို့ငါချက်ချင်းလုပ်ရမယ်။
အသုံးပြုသူများကိုအလိုအလျောက် tweets များအတွက်ပေးဆောင်စေ။ အိုး - အခုအော်သံကိုငါကြားနိုင်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါသာတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအလိုအလျောက်လုပ်ပြီးငါ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်ဖို့ငါပေးမယ်။ ထိုအခါငါအရမ်း spammers ကိုပလက်ဖောင်းစွန့်ခွာသောကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ တွစ်တာတွင်အလိုအလျောက် spam ပို့ခြင်းသည်ပျံ့နှံ့နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
တိုးတက်မှုအပေါ်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တိုးမြှင့်။ တွစ်တာမှာကျွန်တော်မကျော်ကြားသောလူများနောက်သို့လိုက်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်သူများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ထိုတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့်တွစ်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါ်တွင် "Kardashian ကိုငါနောက်သို့ဆက်လိုက်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ @twitter? cc @Support
- Douglas Karr (@douglaskarr) မတ်လ 28, 2016
အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ အဲဒီပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကတွစ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးရလဒ်တွေကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ သေချာတာပေါ့, သူတို့ဟာ [social network ကိုဒီမှာထည့်ပါ] ထက်ပိုပြီးသုံးစွဲသူတွေကိုဝါကြွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအင်တာနက်ကိုအသွင်ပြောင်းသောအတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုချစ်မြတ်နိုးမှုနှင့်တန်ဖိုးထားမှုပြန်ရစေလိမ့်မယ်။
စျေးကွက်၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် Twitter မှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်
ဒီတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကတွစ်တာကိုဘယ်လိုထိရောက်စွာအသုံးချသလဲ။ Follow.com သည်သင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမောင်းနှင်ရန်နှင့်ဤမဟာဗျူဟာ (၆) ခုကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးရလဒ်များတိုးပွားလာရန်ပလက်ဖောင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
မကြောက်ပါနဲ့ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန် Twitter ပေါ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အဖြစ်! ပျမ်းမျှအားဖြင့်လူ ဦး ရေထက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သာလွန်သည်။
အသုံးချ တွစ်တာကြော်ငြာ! သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်သို့မဟုတ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူစာရင်းကိုပင် တင်၍ သင်၏ကြော်ငြာကိုလက်ရှိဖောက်သည်များသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်တူသောလူများကိုပစ်မှတ်ထားရန်ပရိသတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
တွစ်တာတစ်ခုဖြစ်သည် On-the-go စာအုပ်တစ်အုပ်မဖတ်လိုသောနောက်လိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ထူးခြားသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသောသူတို့သည်အမြန်ကိုးကားချက်၊ ပြက်လုံးသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များကိုသာလိုချင်ကြသည်။
အမြဲတမ်းacall-To-action ကို၎င်းသည် retweet ဖြစ်စေ၊ ဒေါင်းလုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ခေါ်ဆိုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် command ကိုမဆိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ပါ link များနှင့်ပုံများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မျှဝေဘို့!
နံပါတ်အစားအသုံးပြုသောဟက်ရှ်သင်္ကေတ မင်းရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ tweets တွေ။ နောက်လိုက်များနားထောင်ရန်ပိုမိုသင့်တော်သည့်အခါ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေများကဲ့သို့) သင်၏ Tweets ကိုထုတ်ဝေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Tweets များကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။
ဒီမှာ Infographic ပါ Twitter Power User Cheat Sheet.
Tags: အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးစာရွက်စာရွက်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းRetweetတွစ်တာtwitter ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုTwitter စျေးကွက်
DialogTech: Call Attribution နှင့်ကူးပြောင်းခြင်း Analytics
Facebook ကြော်ငြာ၏ရည်ရွယ်ချက် ၁၀ ချက်
ဧပြီ 17, 2017 မှာ 7: 52 AM
မှန်ကန်စွာသုံးလျှင် twitter သည်အလွန်အသုံးဝင်လာသည်။
ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပို့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤပို့စ်သည်ကျွန်ုပ်၏ twitter တွင်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးခဲ့ပါသည်။